Breeds | အောက်တိုဘာလ 2021
အဆိုပါ Affenpinscher - ဒီခွေးမွေးမြူ၏အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ Affenpinschers အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောခွေးများကို ၁၆ ရာစုမှဂျာမန်အနုပညာလက်ရာများတွင်တွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့အားကြောင်များနှင့်အဖော်များအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောမျိုးဆက်များမှန်သကဲ့သို့, 19 ရာစုနှောင်းပိုင်းသည်အထိဖောက်၏အဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချရသောတိကျမ်းစာ၌လာသည်မှတ်တမ်းများရှိပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးရှိပုံရသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
အဆိုပါ Airedale Terrier သိရန်ရယူပါ
ခွေးချစ်သူ မင်းတို့ကို Terriers ဘုရင် Airedale Terrier နဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်
အဆိုပါ Airedale Terrier - ဒီခွေးမွေးမြူခြင်း၏အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရန်
Airedales များသည်အမဲလိုက်ခွေးများ၊ စောင့်ကြည့်သောခွေးများနှင့်နာခံခြင်းနှင့်သွက်လက်သောခွေးများကဲ့သို့အလွန်ထူးကဲသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး၊ သစ္စာ ရှိ၍ ဖျော်ဖြေမှုအဖော်များဖြစ်သည်။
အာကီတာ - ဂျပန်မှGရာမထိန်းကျောင်းသည့်ခွေး
Akita သည်ဂျပန်မှလာသည့်ကြီးမားသည့်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ကြွက်သားများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏သမိုင်းကိုရှေးဟောင်းဂျပန်သို့ပြန်လည်ကူးပြောင်းနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသင်္ကေတများဖြစ်သည်။
အာဖဂန်နုန်း Hound မွေးမြူရေးပြန်လည်သုံးသပ်
အာဖဂန်နစ္စတန် Hound ဆိုတာဘာလဲ အာဖဂန်လူမျိုးများသည် hound အုပ်စုမှလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်အလွန်တရာလျင်မြန်။ ခွေးရိုင်းများနှင့်တူသောခွေးရိုင်းခွေးများသည်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အာဖဂန်ခွေးသည် ၂၆ မှ ၂၈ လက်မအထိညှစ်။ ညှပ်ထားသော်လည်းခွေးသည် ၂၄ မှ ၂၆ လက်မအထိရှိသည်။ အထီးအလေးချိန် ... ဆက်ဖတ်ရန်
မဟာ Alaskan Husky - သင်သိထားသင့်သည့်အရာ
Alaskan Husky သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွတ်ဖားတစ်ကောင်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်မိသားစုအတွက်မဆိုကစားနိုင်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဖော်ဖြစ်သည်။ ဒီ crossbreed အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုဖတ်ပါ!
Alaskan Klee Kai ခွေးမွေးမြူရေး - အချက်အလက်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Klee Kai ကို Schibperke နှင့် American Eskimo တို့၏အကူအညီနှင့်အတူ Siberian နှင့် Alaskan Huskies မှဆင်းသက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကိုသင်ခွံထဲမှာတွေ့ရကဲ့သို့တူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်စပ်စု။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအရွယ်အစားအတွက်အလွန်ခိုင်မာသည်၊ The Klee ... ဆက်ဖတ်ရန်
American Pit Bull Terrier အတွက်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
American Pit Bull Terrier သည်ရက်စက်စွာအဓမ္မပြုလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်လမ်းညွှန်တွင်ဤသည်သည်စွယ်စုံနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးစုံသောမျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်မကြာမီသင်သိရလိမ့်မည်။
American Alsatian သည်တောခွေးရိုင်းတစ်ကောင်နှင့်တူနိုင်သော်လည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဖော်ရွေသည်။ ဤကြီးမားသောခွေးတစ်ကောင်အဖော်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။
သင်ဟာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုမောင်းနှင်ပြီးသစ္စာစောင့်သိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်သင်စဉ်းစားရမယ့်မျိုးရိုးတစ်ခုမှာ Alaskan Malamutes ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီမှာကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ထွက်ရှာပါ!
သငျသညျစမတ်ကိုယ်ရံတော်ခွေးရှာဖွေနေ, အဘယ်ကြောင့်နှစ်ခုရောနှောရှိသည်မဟုတ်လော Bullypit သည်သင်ရှာနေသည့်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Bullypit အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ပြင်းထန်သောနှင့်အစွမ်းထက်သောအမေရိကန် Bandogge ကိုသိရန်ကြိုးစားပါ
American Mastiff ဟုလည်းလူသိများသော American Bandog သည်ကျူးကျော်သူများကိုကြောက်ရန်အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၌သူပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများရှိမရှိစမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သောလမ်းညွှန်နှင့်အတူသစ္စာ ရှိ၍ ချစ်တတ်သောအမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကသင်၏နှလုံးကိုအနိုင်ယူရန်အသင့်ပြင်ထားပါ။
American Golden Retriever: ဒီဟာကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Goldie လား။
သင်သည်ရွှေရောင်အရိပ်အမျိုးမျိုးရှိသော Goldie ကိုသင်မြင်ဖူးပေမည်၊ သို့သော်အမှန်တကယ်တွင် Goldens အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်။ အမေရိကန်ရွှေပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အမေရိကန်အလံလွှင့်ထူပါ။
The American Water Spaniel - ဒီခွေးမွေးမြူတာကိုမျှော်လင့်ရမဲ့အရာ
American Water Spaniel (သို့မဟုတ်အတိုချုပ်အားဖြင့် AWS) သည်အမေရိကတွင်မွေးမြူထားသောမျိုးစိတ်အနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွေး၏မူလနေရာအတိအကျအငြင်းပွားမှုများရှိသော်လည်း AWS ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမှတ်တမ်းများကို ၁၈၆၅ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာက Wisconsin ပြည်နယ်၏ Wolf and Fox River ချိုင့်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်များစွာသော ... Read more
သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာအထူးချွန်ဆုံးနှင့်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူကိုချစ်တဲ့ခွေးနှစ်ခုရောနှောလျှင်သင်ဘာရမလဲ ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Aussiedoodle သို့မဟုတ် Aussie Poo နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဒီမှာဖတ်ပါ။
သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေးသည်ပုဆိုးအင်္ကျီ၊ ခိုင်မာသောအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဦး ခေါင်း၏စရိုက်လက္ခဏာတို့ကြောင့်လူသိများသည်။ ဤလှပသောခွေးများသည်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိမရှိကြည့်ပါ။
သြစတြေးလျ Labradoodle အကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားရမလဲ
hypoallergenic ခွေးတစ်ကောင်နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်တူသည်၊ သြစတြေးလျ Labradoodle သည်အခြား doodles အားလုံးနှင့်အဘယ်သို့ခြားနားသနည်း။
မိသားစုအကြိုက်ဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည့် Australian Retriever (Australian Shepherd Golden Retriever ရောနှောခြင်း) သည်သင့်ကို၎င်း၏ခွေးကလေး၏မျက်လုံးများနှင့်ဖမ်းစားလိမ့်မည်။
သြစတြေးလျ Shepherd အပြာရောင်ဟီလာသည်သင့်အတွက်ရောလား။
အစဉ်အဆက်တက္ကဆက် Heeler အကြောင်းကိုကြားသိ? နည်းပညာအရ Australian Shepherd Blue Heeler ရောနှောမှုဟုခေါ်သည်။ ဤအပြန်အလှန်ဖောက်ခြင်းသည်အပြီးသတ်ထိန်းကျောင်းသည့်ခွေးဖြစ်လိမ့်မည်။
chihuahua jack terrier ရောစပ်ခွေးပေါက်စများ
rhodesian ridgeback ခွေးပေါက်တွေဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ